शब्दकोश: "पर + यटन" = पर्यटन
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, October 12, 2009
Dilip Acharya October 12, 2009
घुम्ने भने पछि टाडै जानुपर्छ भन्ने सोच पक्कै पनि हामीहरु धेरैको साझा सोच होला ।
तपाईको लेख पढेपछि म बिचार गर्दै छु, साँच्चै भन्ने हो भने हामीले ('मैले'भन्नु सहि होला) पशुपतिनै राम्ररी घुमेका छैनौं होला । मूल मन्दिरमा एकफन्का मारेर फुत्त निस्कनु बाहेक पशुपति क्षेत्रकै वरपर पनि सायद एक दिन पुरै घुम्न सकिन्छ होला ।
देवकोटाको निबन्धका हरफहरु साँच्चै सधैं सान्दर्भिक छन । "पर यटन" हैन "वर यटन" गर्न लायक धेरै नजिकका ठाउँहरु हाम्रा वरपर नै छन ।
रमाईलो पोष्ट !
Sujan Sharma October 13, 2009
Interesting post.I enjoyed Reading it.
राजेश बुढाथोकी 'नतांश' October 13, 2009
मज्जाको घुमघाम भएछ तपाईको । करिब महिना भयो होला तपाईको ब्लगमा डुबुल्की मार्न नपाएको - काम व्यस्तताले त्यो अवसर गुम्यो । बहुत रमाइलो अनुभव भयो मलाई । छोडेर जान मन लागेन ।
मलाई पनि घुमघाम गर्न निकै मनपर्छ तर सबै चाजोपाजो मिलाउन सक्दिन । सबै पायक पर्नुपर्छ ।
टाँसोको लागि धन्यावाद ।
दिनेश राज October 13, 2009
धाइबा जी ,बुढेश कालमा धर्मकै नाउँमा भ्रमण गर्ने हाम्रा बुढा पाका हरु पनि पर्यटक नै हुन ।आज काममा ब्यस्त भएपनि भोलि ४ धाम , र नेपालका मुक्तिनाथ , स्वर्गद्वारी आदि अवश्य घुम्न पाइन्छ पिर नगर्नुस हेहेहेहे
Basanta October 13, 2009
मननीय टाँसो! सबैलाई घच्घच्याउने कुरा लेख्नुभयो। 'नजिकको तीर्थ हेलाँ' हाम्रो राष्ट्रिय बानीनै भएको छ। जापानीहरु आफ्नै वरिपरि र आफ्नै देशभित्र प्रशस्त घुम्छन्, उनीहरुको आन्तरिक पर्यटन अत्यन्त ब्यवस्थित छ। त्यस्तै बानी हामीमा पनि बसे 'गोरा' नआए पनि हाम्रो पर्यटनले हावा खाने थिएन।
दिनेशराजजीले सहि भन्नुभयो पर्यटन नभनौं तिर्थाटननै भनौं घुम्ने संस्कार त हाम्रो पनि हो । हामीले बढावा कति दिन्छौं र महत्व कति दिन्छौं त्यसैले फरक पार्ने हो ।